Kedu ka esi meziwanye ngwaahịa m na Amazon na ọchụchọ ọchụchọ?
Ndepụta ngwaahịa na Amazon na ọchụchọ ọchụchọ bụ maọbụ abụọ isi nke asọmpi gị. M na-ekwu na ogo nke aha ndepụta gị, nkọwa ngwaahịa na setịpụtrị ihe ngosi gbasara onyinye gị - ha niile na-agbaso gburugburu isiokwu kwesịrị ekwesị na iji ha mee ihe. Ya mere, i nwere ike ileta ndị asọmpi na Amazon site na iji okwu ọchụchọ edozi ụzọ ziri ezi. Na m ga-egosi gị ọtụtụ ezigbo nhọrọ iji wụnye n'ime nyocha ọchụchọ na atụmatụ nchịkọta ngwaahịa.
Ma tupu anyị amalite, m nwere ike ịnweta ọnụọgụ abụọ iji zere ma ọ dịkarịa ala ihe ndị na-esonụ:
Nkọwa aha, nkọwa ngwaahịa, na okwu mgbochi abaghi ​​uru na mkpuru okwu ndi ozo na ogologo oge.
Ngalaba ọ bụla a kpọtụrụ aha yiri ka ejiri okwu ndị jupụtara na ya, si otú a mee ka ihe niile jupụta.
Inweghi otutu ihe oyiyi ma obu ihe omimi nke di ala (buru n'uche na na nani otu ma obu abali abuo maka onu ahia i gaghi enweta ebe obula.
Na-enweghị ozi dị oke egwu na mpaghara ahụ na nkọwa ngwaahịa ma ọ bụ ogwe ihe nkwụsị.
Ozugbo i jidere na ihe niile dị na ndepụta nke ngwaahịa gị, ọ bụ oge ịchọta ohere ụfọdụ na-enye ohere na Amazon na ọchụchọ ọchụchọ. N'ụzọ dị otú ahụ, ị ​​ga-achọ ịnweta nnukwu foto nke isi okwu ndị a na-ahụkarị nke ndị na-asọmpi kacha nso. N'aka nke ọzọ, Otú ọ dị, ọ dị mkpa ịghọta usoro dị iche iche nke okwu ọchụchọ Amazon iji mee ka ọtụtụ n'ime ihe ndị a na-eji azụ ahịa na-eme ihe n'ebe ahụ. Nke a bụ mgbe ahụ kpọmkwem software ngwanrọ abata n'ime egwu! N'ime ọtụtụ nhọrọ dịgasị iche iche, enwere m ike ịkwado ndị na-enyere gị aka n'ịntanetị abụọ na-arụ ọrụ.
Okwu ndị ahịa bụ ngwá ọrụ dị ukwuu nke ọchụchọ Amazon. Ọ nwere ike inyere gị aka ịmalite ịmepụtawanye ngwaahịa gị ka ha wee nwee ike ịchọta arịrịọ ndị ahịa. N'ikpeazụ - iji gosipụta n'elu ọchụchọ dị mkpa. Gbalịa Okwu Ndị Ahịa iji ghọta kpọmkwem okwu ndị nwere mpịakọta ọchụchọ kachasị elu ka ị gbanwee. Rịba ama na a na-emepụta nhọrọ a kpọmkwem maka ntanetị ecommerce na azụmahịa mbupu-ahịa karịsịa. N'etiti akụkụ ya kachasị elu, ngwá ọrụ ahụ na-anakọtakwa okwu ndị e ji mee ihe ọ bụghị nanị na Amazon n'onwe ya ma na-achịkọta okwu ndị dị n'elu site na ebe ndị ọzọ dịka Jet na Walmart.
Ihe nwere ike ịghọ ezi enyi ọ bụla na-ere ahịa na Amazon. Kedu ihe ọzọ - isiokwu a na ngwá ọrụ nyocha ngwaahịa na-egosipụta ike ya kachasị oke mgbe ị nọ na mkpa nke nghọta dị egwu bara uru. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, Akụrụngwa nwere ike inyere gị aka ịchọta ihe kachasị mma nke mkparịta ụka kachasị elu na ọchụchọ ọchụchọ ndị na-ere ákwà na Amazon maka. N'otu oge ahụ, ngwá ọrụ a nwere ike igosi na ị nwere ike ịmepụta mkpuru okwu na-enye gị aro ndị nwere ezi uche na isiokwu ndị na-ewu ewu nwere ike iji nlezianya anya gị karịa oge. Akụkụ ahụ nwekwara ụdị pụrụ iche nke inbuilt nke na-enye ohere iji nyochaa PPC ngwa ngwa ka ha wee na-agba ọsọ n'ogologo ha. Ya mere, egbula oge ịnwale ma hụ ihe niche na-echere naanị maka nhazi ndepụta ngwaahịa kachasị mma Source . Jisie ike!